Fanadinam-panjakana: higadona afaka iray volana ny CEPE | NewsMada
Fanadinam-panjakana: higadona afaka iray volana ny CEPE
Efa tsindrin-daona ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana. Afaka iray volana katroka (1 septambra) ny fanadinana CEPE. Aorian’izay ny fanadinana BEPC. Ny valanaretina anefa ity, tsy mbola ahitana mangirana ny hivoahana aminy. Manaporofo izany ny fitombon’ny marary isan’andro, araka ny tatitra avoakan’ny CCO.
Mivonona ao anaty tahotra sy tebiteby ny mpianatra. Mamerin-desona araka izay tratran’ny fitadidiana na tsy mifantoka tanteraka aza noho ity Covid-19 manafika mila ho isan-tokantrano ity. Manginy fotsiny ny krizy aterany.
Maro amin’ny tokantrano Malagasy ny nanaovan’ny Covid-19 amboletra. Nidonam-pahoriana ny sasany ary mbola mamela takaitra hatramin’izao ho an’ny tokantrano hafa.
Misy fiantraikany amin’ny fiatrehan’ny ankizy fanadinana izany. Mampikorontana ny fifantohana sy ny fitadidiana. Miteraka faharefoana saina mihitsy aza raha ny filazan’ny mpampianatra iray sendra anay.
Tsy maintsy atrehina anefa ny fanadinana. Samy mizaka izay vokany eo na ny mpianatra na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny. Samy ao anatin’ny fahasahiranana amin’ny sehatra maro ny rehetra vokatr’ity aretina tampoka tsy azo ialana ity.
Hafatrafatra ho an’ny ray aman-dreny ny amin’ny tokony hanajana hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana any am-panaovana fanadinana.